Oge ụfọdụ, anyị na-enweta tupu-enweta ego, tupu ulo oru mmalite na-arịọ anyị maka ahịa enyemaka na e nwere ihe n'ezie ihe anyị nwere ike ime ebe ha na-enweghị mmefu ego. Anyị na-enye ha ndụmọdụ ụfọdụ nke gụnyere ịkwado ire ahịa ọnụ (aka ndị na-ezo aka) ma ọ bụ were obere ego ha nwere wee nweta nnukwu ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze. Ebe ọ bụ na ọdịnaya na inbound marketing na-achọ nyocha, atụmatụ, ule na ike - ọ na-ewe oge dị ukwuu ma chọọ ọtụtụ akụrụngwa maka mmalite.
Anyị edeela n'ihu otú pitch na olee otú ọ bụghị pitch a blogger ma ọ bụ nta akụkọ. Ide ederede dị mkpa, nkọwa nkọwa nye onye nta akụkọ bụ ụzọ dị mma iji gbalịa ịme ka ịmalite mmalite gị. Fọdụ ndị folks kwenyere na nke a bụ naanị SPAM mana ọ bụghị. Dịka onye na-ede blọgụ teknụzụ na-ere ahịa, ana m atụ anya, hụrụ n'anya ma jiri ọkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla iji chọpụta ngwaahịa na ọrụ ọhụụ dee banyere blog a. Isi ihe dị na ya bụ otu esi akpụpụta ya na ma ọ dị ndị na-ege m ntị ntị.
Pịa igodo bụ saịtị mmalite mmalite nke chịkọbara email na akaụntụ twitter nke ndị nta akụkọ na ntanetị niile na-ede banyere mmalite. Nke kachasị mma, ọ bụghị ndenye aha dị oke ọnụ. Ọ bụ naanị ego ole na ole iji nweta ndepụta niile nke ndị nta akụkọ.
Ndụmọdụ m maka ịmalite - rụpụta ozi nkeonwe na akwụkwọ nke ọ bụla ịchọrọ iru. Debe ya n'ezoghị ọnụ na ruo n'ókè, ekwubiga okwu ókè na ị bụ ihe na-esote nnukwu, zipu otu di na nwunye screenshots nke njikọ na vidiyo maka ha ka ha lelee… wee chere. Biko edekwala ide ha ugboro ugboro… nke ahụ na-ewe iwe. Ọ bụrụ na ha chọrọ ide banyere gị, ha ga-ebu ụzọ kpọtụrụ ha.
Tags: onye na -ede blọgụịde blọgụchọta ndị na-ede blọgụ na twitterchọta ndị nta akụkọ na twitterodeakụkọ bioodeakụkọ pitchpitchpịamalitemmalite ndi oru nta akukoahia mmalitemmalite